Usuku My Pet » 3 Amathiphu To The Best Yakha Online Dating Profile
3 Amathiphu To The Best Yakha Online Dating Profile
Ukubeka a profile ukuphola online kungaba kokubili i Ikhipha kanye umqondo esesabisayo konke ngesikhathi esisodwa. The isasasa livela Kusobala kusukela umcabango wokuthi mhlawumbe nawe nje kungase ukuhlangabezana ukuthi umuntu ekhethekile ngokusebenzisa internet esasibonakala emngceleni-less. The ukwesaba livela umcabango ezibuza balindeleke ukuba bafake profile yakho. Uma ufana nabantu abaningi, Cishe ufuna ukubeka phambili setfulo best of wena, kodwa wena nje awazi kanjani ukwenza ukuthi. Ichaza wena kungaba lula udideke. Nakuba kungase kubonakale kancane like ubhala incwadi cover for a isicelo umsebenzi, iqiniso liwukuthi uzama ngempela ukudonsa in dates-hhayi engahle abaphathi abangahle! Ngenxa ubunkimbinkimbi ukudala i ukuphola profile online, kukhona izinkampani empeleni eziningi izibophezele enjongweni eyodwa-alithola internet dating amaphrofayli. Ngenhlanhla, kunezindlela eziningana ukuthi ungenza profile yakho siqu / "ngami" section ethakazelisa nakakhulu, ngaphandle kokuthi ukhokhe "professional" ukukwenza wena.
Baxoxa: Mhlawumbe omunye ebaluleke kakhulu profile kubhala tips ukukhumbula, nokuxoxa izindaba in profile yakho nakanjani indlela proven ekudonseleni abantu isifiso okungenani uthole ukwazi okwengeziwe ngawe. Izitatimende ezifana "Ngingumuntu nice, fun, guy entsha "kukhona abajwayelekile futhi empeleni kwembulani okuncane kakhulu mayelana umuntu. Nokho, ekhetha ukunikeza anecdote emfushane ukumela ngamunye walabo izincazelo siyokulethela sikhumbuleke kakhulu futhi ezithakazelisayo. (Ngokwesibonelo, "Ngelinye ilanga ngenkathi emaphandleni Ghana ..."). Kunjalo, kuyinto esemqoka ukuthi ugcine lezi izindaba ezimfushane; ngeke nje lokhu ugcine profile yakho kalula efundekayo, kodwa zingakhiqiza ithuba elihle kakhulu ngesihloko ingxoxo for usuku lwakho ("... Ngakho sitshele okwengeziwe sikhathi ..."). Enye indlela yokwenza lokhu ukunikeza izibonelo eziqondile mazwi alula generic. Ngokwesibonelo, wathi: "Someday ngiwenze wena isignesha BBQ yami izimbambo kanye coleslaw ngisho" ekhumbulekayo futhi personable ngaphezu ethi, "Ngangimhlonipha ngempela uthanda ukupheka ngaphandle hlupha yami."
Mema Imibuzo: A follow yemvelo kuze kube seqophelweni lokuqala, qinisekisa ukuthi profile yakho dating inikeza amathuba abanye ukubuza imibuzo. Kungakhathaliseki ngokuqondile (njengoba in, "Zizwe ukhululekile ukubuza kimi okwengeziwe ...") noma nje ngobuqili iboniswa, a profile ukuthi umema uphenyo imininingwane letsite ngawe kubonisa ukuthi wena an open, ngokumema umuntu kanye. Ngamanye amazwi, uma isitayela profile yakho okulotshwe umsindo ngokuphelele ephelele futhi ivalwe off, ke abanye bangase bacabange ukuthi indlela wena too. Gcina yakho ongakhetha dating evulekile by ukuzwakala like an open, Umuntu ngokumema wena.
Thembeka: Ekugcineni, ukwethembeka Kusobala isithako isihluthulelo yimuphi kuphumelele dating isipiliyoni, ukuthi intanethi noma cha. Uma profile yakho kulotshiwe ngendlela efana ukuba overemphasize nakho noma "ubuchwepheshe" ukuthi kukhona nje ayihaba of engokoqobo, abanye yokubuka iphrofayela yakho cishe uzokwazi ukutshela ngokushesha noma kamuva. Ukukhulumisana Ukungathembeki akalokothi a foot kuhle ukuqala off on. Nokho, lokhu akusho ukuthi kubalulekile ukuthi ukunikeza kudalulwe mayelana zonke izifundiswa izinto zakho inthanethi noma. Ngokwesibonelo, angafuni embule umsebenzi wakho wamanje ngenxa yokwesaba ukuthi abanye bangase bafune ukuphola wena umane for imali yakho ngesizathu esemukelekile state kuphela, "In the field wezokwelapha" esikhundleni "udokotela ohlinzayo olungisa amathambo" in a incazelo siqu. Esimweni esinjalo, akukho kuye kwazanywa ukuba enze lokho oyikho sound "esingcono 'kunaleso engokoqobo.